Ubungqina beNyunyana yeZiThathu okanye ezininzi zeSetishi
Xa iziganeko ezibini zihlangene ngokuthe ngqo , ubukhulu bemibutho yabo bunokubalwa ngombandela wokongeza . Siyazi ukuba ngokuxubha ukufa, ukugqithisa inani elingaphaya kwezine okanye inani elingaphantsi kweyesithathu kuneziganeko ezihlangeneyo, kungekho nto efana nayo. Ngoko ukufumana ithuba lo mcimbi, songeza nje amathuba okuba siqhube inani elingaphaya kwezine ukuya kunokwenzeka ukuba siqhube inani elingaphantsi kwethathu.
Kwiimpawu, sinezinto ezilandelayo, apho i-capital P ichaza "inokwenzeka":
P (ngaphezulu kwezine okanye ngaphantsi kweethathu) = P (ngaphezu kwezine) + P (ngaphantsi kweethathu) = 2/6 + 2/6 = 4/6.
Ukuba iziganeko azihambisani ngokuthe ngqo, ngoko asidibanisi nje amathuba okubakho kunye, kodwa simele siphumelele amathuba okubambisana kweziganeko. Ukubonelelwa ngeziganeko A kunye noB :
P ( A U B ) = P ( A ) + P ( B ) - P ( A ∩ B ).
Apha siza kubhala ukuba kungenzeka ukubala ngokuphindwe kabini ezo zinto zise- A kunye no- B , kwaye ke kutheni sithatha isithuba se-intersection.
Umbuzo ovela kule nto "Kutheni ukuma ngeesethi ezimbini? Yiyiphi inokwenzeka yemanyano yeesethi ezimbini? "
Ifom ye-Union of Sets Setshatu
Siza kwandisa iingcamango ezingentla apha kwimeko apho sineetekisi ezintathu, esiza kubhekisela ku- A , B , no- C . Asisoze sithatha into engaphezu kwalokhu, ngoko kunokwenzeka ukuba iiseti zinemingcele engenanto.
Injongo iya kuba kubala umanyano wamanyathelo amathathu, okanye uP ( U U B U C ).
Ingxoxo engenhla yeesethi ezimbini isabambe. Singakwazi ukuhlanganisa ndawonye amathuba okuba iisethi nganye, A , B no- C , kodwa ekwenzeni oku sinokuzibala ngokuphindwe kabini.
Izinto ezisemngceleni we- A no- B ziye zabalwa ngokuphindwe kabini njengangaphambili, kodwa ngoku kukho ezinye izinto ezingabalwa kabini.
Izinto ezisemngceleni we- A kunye no- C kunye ne-intersection ye- B kunye no- C ngoku zibalwa ngokuphindwe kabini. Ngoko ke amathuba okubambisana nawo kufuneka asuswe.
Kodwa ngaba sithathile kakhulu? Kukho into entsha yokuqwalasela ukuba asizange sibe nexhala malunga nokuba kwakukho iisethi ezimbini kuphela. Njengoko naziphi na iisethi ezimbini zingaba ne-intersection, zonke iiseti zintathu zinokuba ne-intersection. Xa uzama ukuqinisekisa ukuba asizange siphinde sibone nto, asizange sibalwe kuzo zonke izinto ezibonisa kuzo zonke iisethi. Ngoko umlinganiselo we-intersection zazo zonke iiseti kufuneka zongezwe kwakhona.
Nantsi ifom efumaneka kwiingxoxo ezingentla:
P ( B ) + P ( A ) + P ( B ) + P ( C ) - P ( A ∩ B ) - P ( A ∩ C ) - P ( B ∩ C ) + P ( A ∩ B ∩ C )
Umzekelo Ukubandakanya iiDice ezimbini
Ukubona ifom ye-intanethi yomanyano weesethi ezintathu, mhlawumbi sidlala umdlalo webhodi oquka ukufaka iidayisi ezimbini . Ngenxa yemigaqo yomdlalo, kufuneka sibe ncinane enye yedayisi ukuba ibe ezimbini, ezintathu okanye ezine ukuze ziphumelele. Yintoni na amathuba oku? Siyaqaphela ukuba sizama ukubala ithuba lokuba umanyano weziganeko ezintathu: ukugqithisa ubuncinane ezimbini, ukugqithisa ubuncinane ezintathu, ukunyuka ubuncinane enye.
Ngoko ke singasebenzisa le ndlela ingentla ngenamathuba alandelayo:
Ubunokwenzeka bokuqhawulwa kwezi zimbini ngu-11/36. Inani lokubala apha livela ekubeni kukho iziphumo ezithandathu apho kuqala ukufa kubini, ezintandathu apho iyesibini ziyafa zimbini, kunye nesiphumo esisodwa apho zombini iidayisi zibini. Oku kusinika 6 + 6 - 1 = 11.
Ubungakanani bokugxotha ezintathu ku-11/36, ngenxa yezizathu ezifanayo njenga ngasentla.
Ubungakanani bokugxila ezine ku-11/36, ngenxa yezizathu ezifanayo njenga ngasentla.
Ubunokwenzeka bokugqithisa ezimbini kwaye ezintathu zi-2/36. Apha siyakwazi ukuluhlu nje izinto ezinokwenzeka, ezo zimbini ziza kuqala okanye ziza kuza okwesibini.
Ubunokwenzeka bokugqithisa ezimbini kunye neyesine ngu-2/36, ngenxa yezizathu ezifanayo ukuba ubunokwenzeka bobabini kunye neyesithathu ngu-2/36.
Ubunokwenzeka bokugqithisa ezimbini, ezintathu kunye nezine zi-0 kuba sithatha iidayisi ezimbini kwaye akukho ndlela yokufumana amanani amathathu kunye namadayisi amabini.
Ngoku sisebenzisa i-formula kwaye sibone ukuba amathuba okufumana ubuncinane ezimbini, ezintathu okanye ezine
Umrhumo weManyano yoManyano weeMpahla ezine
Isizathu sokuba kutheni umlinganiselo wokuba umanyano weesethi ezine uhlobo lwawo lufana nokuqiqa kwefom yeesethi ezintathu. Njengoko inani leetekisi landa, inani leebini, i-triples kunye nokunyuka ukwanda ngokunjalo. Iiseti ezine zidibaniselwano ezithandathu zokubambisana ezifunekayo ukuba zikhutshwe, iintambo ezine eziphindwe kabini zokungena kwi-intersection ene-quadruple efuna ukukhutshwa. Ukunikezelwa kweesethi ezine, i- A , i- C kunye no- D , ifom ye-union yeetekisi zilandelayo:
P ( A ) + P ( B ) + P ( C ) + P ( D ) - P ( A ∩ B ) - P ( A ∩ C ) - P ( A ∩ D - P ( B ∩ D ) - P ( C ∩ D ) + P ( A ∩ B ∩ C ) + P ( A ∩ B ∩ D ) + P ( A ∩ C ∩ D ) + P ( B ∩ C ∩ D ) - P ( A ∩ B ∩ C ∩ D ).
Singabhala iifomula (eziza kubonakala zikhwankqisayo kuneyona ngasentla) ukuze kube khona umanyano weesethi ezine, kodwa ngokufunda iifomula ezingentla kufuneka siqaphele ezinye iipateni. Ezi ipateni zibamba ukubala iiyuniyoni ezingaphezulu kweesethi. Ubungakanani bomanyano naliphi na inani leetekethi lingafumaneka ngolu hlobo lulandelayo:
Yongeza iimeko ezizimeleyo zeziganeko.
Susa iimeko ezinokubambisana kwazo zonke iziganeko.
Yongeza ubungqina bendlela yokubambisana kwayo yonke imicimbi yeziganeko ezintathu.
Susa iimeko ezinokuthi zenzeke kuzo zonke iziganeko ezine.
Qhubekisa le nkqubo kuze kube yithuba elidlulileyo lithuba lokungenelela kwenani elipheleleyo leetekethi esaqala ngazo.
Indlela yokusebenzisa 'iPropi' ngesiSpanish
Ngaba ii-Singles kwi-Golf Course Ngaba Unelungelo lokudlala?
Iimfazwe eziMnandi kunye eziMbi kakhulu zeMfazwe malunga neIraq
Indlela yokudweba kwiSitayela esicacisayo okanye sePainterly
Iingelosi zithandaza: Ukuthandaza kuNkulunkulumkhulu uHaniel
Indlela yokulungisa i-DBGrid Widow Widths ngokuzenzekelayo